Kakhulu iPeri nguMbala wePantone woNyaka ka-2022 | Bezzia
IPeri kakhulu nguMbala wePantone woNyaka wama-2022
Sele sisazi ukuba ngowuphi umbala okhethiweyo Umbala wonyaka wama-2022. Ngumbala omtsha ogama lingu Very Peri (17-3938). Umthunzi oguqukayo we-periwinkle blue kunye nomthunzi ocacileyo wobumfusa obomvu odibanisa ukunyaniseka kunye nokuhambelana kweblue kunye namandla kunye nomdla wobomvu.
IZiko leMbala lePantone, Iyunithi ephetheyo ekukhetheni umbala wePantone wonyaka kunye noqikelelo lwentsingiselo yemibala yehlabathi ithathela ingqalelo ukuba i-Very Peri ibonisa ukudityaniswa kobomi bale mihla kwimbalelwano kunye neendlela zemibala kwihlabathi ledijithali kunye nendlela ezizibonakalisa ngayo kunye kwihlabathi elibonakalayo kwaye ngokuphambeneyo.
Njengoko siphuma kwixesha elinzima lokuzihlukanisa, iimbono zethu kunye nemigangatho iyatshintsha. Kwaye ubomi bethu bomzimba kunye nedijithali budibene ngeendlela ezintsha. «Kwaye le nto intsha kwaye inzima iblue hue edityaniswe nobomvu obumfusa iqaqambisa uluhlu lwamathuba anikezelwe kuthi »wongeza uLaurie Pressman, uSekela Mongameli wePantone Color Institute, ngexesha lokubonisa uMbala wePantone woNyaka ka-2022.
1 Indlela yokusebenzisa umbala wonyaka ngaphakathi kwindlu
2 Umdibaniso wombala
Indlela yokusebenzisa umbala wonyaka ngaphakathi kwindlu
"I-Pantone 17-3938 Very Peri icebisa into entsha, izisa imvakalelo yokudlala ngokutsha kwiindawo zangaphakathi kwaye izisa ubomi ngokudibanisa imibala engaqhelekanga." Ngumthunzi oguquguqukayo lowo ivuselela umoya wokudala, ngoko ifanelekile ukuhlobisa zombini iindawo zentsapho kunye neendawo zokusebenza.
Ingasetyenziselwa ukwenza umbala iindonga okanye njengesandi kwifenitshala okanye ukuhombisa ikhaya. Ngumbala onomtsalane kakhulu kwaye kulula ukuwuthanda, kodwa kulumkele ukugqithisela! Lo mbala ucetywe yiPantone njengoMbala woNyaka ka-2022 uyamangalisa. Ukuba awufuni ukudinwa ngokukhawuleza, kuya kufuneka uyisebenzise ngamathamo amancinci.
E-Bezzia siyawuthanda umbono wokusebenzisa iphepha lodonga elipatheni kulo mbala ukucanda indawo yokufunda kwindawo eqhelekileyo, kodwa kunye nokuyidibanisa kumagumbi okuhlala kunye namagumbi okulala ngendlela isitulo, itafile esecaleni, izinto zokuhombisa udonga okanye iivasi. Iinkcukacha ezincinci, kodwa zivelele.
Ngoku siyazi ukuba zeziphi iindlela esinokuyisebenzisa ngazo kumakhaya ethu, kufuneka nje siyazi ukuba yeyiphi imibala esinokuyidibanisa nayo. Kwaye ukusinceda ukuba sibandakanye lo mthunzi ukhethekileyo kuyilo lwethu, iPantone iyenzile iiphalethi ezine zombala ezizodwa. Iphalethi nganye idlulisa imo eyahlukileyo, ebonisa ukuguquguquka kwe- Very Peri, kwaye ixhaswa yimidibaniso emithathu yemibala ecetyiswayo. Ngaba uyafuna ukuwafumanisa?
UMthetho wokuLungelelanisa yiphalethi yombala ehambelanayo olungelelwaniso lwendalo lweetoni ezifudumeleyo kunye nezipholileyo zixhasa kunye nokuphuculana. Ubukhazikhazi bombala wonyaka buqiniswa ngaphakathi kweli phalethi elungelelanisiweyo ngobuchule, injecting ingqiqo yokuphila kunye nokubonakalayo.
Umthombo ludibaniso olubanzi noluhambelanayo lwemithunzi esekwe kwindalo eqaqambisa ukuhambelana kohlaza kunye nePeri ebekwe ngasemva, kunye neepropathi ezisempilweni zezi thunzi ezichuliweyo kunye nezondlayo.
En Inkwenkwezi yoMboniso, singqonge ezona zinto zivuyayo nezifudumalayo kuzo zonke iithowuni eziluhlaza kunye nephalethi yeeklasikhi kunye nokungathathi hlangothi. Bebonke, ubuhle kunye nesimbo sabo esijongelwa phantsi sidlulisela umyalezo wobugocigoci obungaphelelwa lixesha.
Iimfuno lukhetho lombala odlalwayo noluncuthu lwemibala yolonwabo olungenakuthinteleka kunye nokuzenzekela, okomelezwe kukuzithemba okungakhathaliyo kunye nesimilo esikhaphukhaphu se-Very Peri, umbala oluhlaza okwesibhakabhaka omenyezelayo omdlalo wayo ukhuthaza intetho engathintelekiyo kunye nokulinga.
Ngokwakho yindibaniselwano yakho ngeetoni ezingathathi hlangothi kunye nohlaza eyona itsala umdla wethu. Yintoni ngawe Sicinga, nangona kunjalo, ukuba kungcono ukuba ezi zingabi mnyama. Kwaye yeyokuba indibaniselwano nemibala emnyama efana nale icetywayo kwiNkwenkwezi yomboniso inokwenza mnyama ngokugqithisileyo indawo engenamilinganiselo efunekayo kunye nokukhanya kwendalo.
NjengoKhetho lwePantone loMbala woNyaka ngo-2022? E-Bezzia ngumbala ebesiwuthanda kakhulu kodwa nangona uguquguqukayo asiyiboni ilula kakhulu ukuyidibanisa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ukuhonjiswa » Iindlela zokuhombisa » IPeri kakhulu nguMbala wePantone woNyaka wama-2022
Indlela yokukhulisa umntwana onobuntu obuqinileyo
Ukutya oku-4 okukhobokisa kakhulu okubeka impilo yakho emngciphekweni